Presslọ Pịa - Prairie State Legal Services
Kpọtụrụ ndị mmekọ: Ajuju ajuju ajuju bu ndi a na-enweta ubochi uka n’etiti 8:30 AM na 5:00 PM na:
Tom Masari Onye njikwa nke Ahịa & Nkwukọrịta (815) 668-4425 [email protected]
Akwụkwọ Nweta Nha
Akụkọ na akụkọ banyere nzukọ anyị.
Akwụkwọ Akụkọ November 2021
Akwụkwọ Ozi Eprel 2021
Akwụkwọ Akụkọ November 2019
Ọkụ Prairie 2020
Ọkụ Prairie 2017
Ọkụ Prairie 2016
Ọkụ Prairie bụ kwa afọ doket nke dị ịrịba ama ikpe na rụzuru site na ndị ọka iwu anyị na Prairie State Legal Services, Inc.
Akụkọ ọdịiche ikpe ziri ezi 2022
Na-adịbeghị anya News & Isiokwu
Legal Service Corp na-ewepụta nchoputa na mkpa iwu obodo na-egbobeghị nke ndị America na-enweghị ego.
Ọrụ gbasara iwu Prairie steeti na onye omebe iwu steeti na-enye ohere nke abụọ na enyemaka iwu efu
Onye omebe iwu steeti Steve Stadelman (D-Rockford) mere Mgbakọ ohere nke abụọ nke 2022 na Mee 20 na Nordlof Center na ogbe ndịda Rockford. Ihe karịrị mmadụ 170 gara nzukọ otu onye na ndị ọka iwu afọ ofufo maka enyemaka iwu n'efu n'ịkwado arịrịọ iji kpochapụ ma ọ bụ mechie ndekọ mpụ.
Ọrụ Iwu Prairie State, Akwụkwọ ọhụrụ Illinois Mwepụta 'Hichapụ Ndekọ Gị' Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Prairie State Legal Services na New Leaf Illinois na-ewepụta mgbasa ozi mgbasa ozi n'ụzọ ọhụrụ na mpụga iji mee ka mmata na ọnụọgụ ndị mmadụ na-achọ maka mkpochapụ cannabis na mpaghara ọrụ anyị.
Mmemme Internship Summer nke Prairie State na-enye ụmụ akwụkwọ ahụmịhe n'ezie n'ụwa
Site na Bloomington ruo Waukegan, na Rock Island ruo Kankakee, ụmụ akwụkwọ iwu afọ nke mbụ, nke abụọ na nke atọ—na-eje ozi dị ka ndị nkuzi Prairie State Legal Services (PSLS) ga-eji oge okpomọkụ ha na-emikpu onwe ha n'ime ọmarịcha ọrụ ọha na eze PSLS na-emere ndị ahịa ya.
Echiche akụkọ ihe mere eme nke ọrụ iwu obodo Prairie: Ime mmemme afọ 45 nke ọrụ
Tuzdee, Mee 31 bụ ụbọchị pụrụ iche: ncheta afọ 45 nke PSLS! Anyị arụzuola ọtụtụ ihe n'ime afọ 45 mbụ anyị wee gosipụta na anyị dị mma na imepụta ihe n'ịzaghachi ihe ịma aka ka anyị na-agbasi mbọ ike na ebumnuche anyị nke ịnye ohere nha anya maka ikpe ziri ezi na idozi nsogbu iwu na-emetụta mkpa ndị ahịa.
Icheta Onye isi oche ntọala ntọala Joseph A. Dailing
Joseph (Joe) A. Dailing nwụrụ n'isi ụtụtụ nke June 9, hapụrụ ihe nketa dị egwu nke ịkwalite ohere ikpe ziri ezi maka mmadụ niile. Ọ dị afọ 78.
Ụlọ ọrụ PSLS emechiela – ụbọchị ncheta
Ụbọchị Ncheta na-asọpụrụ ndị nyere ndụ ha mgbe ha na-echekwa ndụ nke ndị ọzọ n'ụwa nile. Na emume ncheta ụbọchị ncheta, a ga-emechi ụlọ ọrụ PSLS Mọnde, Mee 30, 2022.
Obi ụtọ ụbọchị ndị nne nye ndị nne niile mara mma nọ n'ebe ahụ!
Mee mmemme ụbọchị Nne gị n'ụzọ ziri ezi site n'ịkesa ozi gbasara ọrụ New Leaf Illinois yana otu anyị nwere ike isi nyere aka kpochapụ ndekọ cannabis tozuru oke.
Ọrụ iwu nke Prairie State VISTA kwụsịrị ọrụ afọ atọ nke Mee 7
AmeriCorps mere emume nnabata mba ya n'oge na-adịbeghị anya Maachị 13-19. N'ịsọpụrụ mmemme AmeriCorps-Volunteers in Service to America (VISTA), anyị nwere obi ụtọ ime ka anyị pụta ìhè Community Outreach VISTA April Foster, onye ga-ejedebe afọ atọ nke ọrụ na ụlọ ọrụ Peoria nke Prairie State Legal Services taa. Mmemme AmeriCorps-VISTA bụ mba...
Soro wee kesaa netwọkụ mmekọrịta nke Prairie State Legal Services
Echefula ịga na ibe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na LinkedIn. Dị ka ị maara, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ebe niile na-adabere na netwọk mmekọrịta maka ozi na nkwurịta okwu.
Kọmiti ndị ọka iwu maka ebe obibi ka mma na-anabata ụlọọgwụ mkpochapụ nchụpụ na CHA Family Investment Center, 4859 South Wabash, na Chicago, IL, na June 16 na 30, site na 5:00 ruo 8:00 Pm. Debanye aha ka ịhụ gị ma ị tozuru oke. Ị ga-edobe ebe maka oge atọrọ. Mụtakwuo, ebe a: bit.ly/376O6Ru	... Lee MoreLee obere
Ụlọ ọgwụ nchụpụ nchụpụ LCBH, Mee 26, Jun 16 & 30 - Ọrụ Iwu Ọchịchị Prairie
Kọmiti ndị ọkaiwu maka ebe obibi ka mma na-anabata ụlọọgwụ mkpochapụ nchụpụ na CHA Family Investment Center, 4859 South Wabash, na Chicago, IL, na Mee 26, June 16 na 30, site na 5:00 ruo 8:00 Pm. R...